ဒူဘိုင်းမှစွမ်းအင်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင် အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေး - ကျွန်ုပ်တို့၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကိုခရီးသွားပါ။
ဒူဘိုင်းကနေကောင်းသော & အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ငါ့နာမကို Sanni Gnankpe ဖြစ်ပါသည်
မေလ 29, 2019
အဆိုပါအမြန် Track အပေါ်ယူအေအီး
ဇြန္လ 2, 2019
ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာချန်နယ်လ်အိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလွန်လူကြိုက်များကြသည်။ နေ့တိုင်းကျွမ်းကျင်သူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဒူဘိုင်း, အဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ပင် Sharjah ထံမှအံ့သြဖွယ်အဖြစ်အပျက်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမပို့။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်လိုက်များအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကမက်ဆေ့ခ်ျကို။ ရိုးရှင်းစွာအခငျြးခငျြးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဒူဘိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းမွန်သော & အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ပေးပို့ဖို့စီမံထားပါတယ်။
သူမကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဒူဘိုင်းအတွက်အနည်းငယ်ဓာတ်ပုံများပေးပို့ဖို့စီမံခန့်ခွဲအဖြစ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအွန်လိုင်းသူတို့ကို post မှပျော်ရွှင်ကြသည်။ Phm ဖက်ရှင်နှင့်လူနေမှုပုံစံတီထွင်ထံမှ.
ယူအေအီးအစိုးရဒူဘိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အပေါ်စိတ်အားထက်သန်သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကျန်းမာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မလုပ်နှင့်၎င်းတို့၏ Arabic အဘိဓါန်အိပ်မက် thru လာစေမထိုက်မတန်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အစိုးရသည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပြည်နယ် ၀ န်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးအမျိုးသားပျော်ရွှင်မှုနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့နေသော ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင် သို့မဟုတ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးနေရာလေးကိုသတင်းအချက်အလက်အပိုင်းအစရပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်ဤအခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းရှိအခြားအားထုတ်မှုအကြောင်းဖတ်ခြင်းမပြုမီ။ သငျသညျကျိန်းသေကောင်းစွာဒူဘိုင်းအတွက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်လမ်းညွှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အလုပ်အတွက်အရမ်းပင်ပန်းဖြစ်ကြပါလျှင်ထိုမှတပါး, ထိုပြည်၌သင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုကောင်းကောင်းမအိပ်ထိရောက်စွာသင်၏အချိန်ကိုအသုံးပြုရန်သေချာစေရန်။ ဒါကြောင့်သင်အများကြီးပိုမြန်ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါလိမ့်မယ်သင်ကသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများအတွက်ပိုပြီးအချိန်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းဘဝတစ်လမ်းအဖြစ်သာယာဝပြောရေးကိုမှေးမွူနှင့်လူမြိုး၏ သာ. ကြီးမြတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုကြွယ်ဝဖို့ယူအေအီးရှိလူများ, အစိုးရနှင့်ကျယ်ပြန့်အသိုင်းအဝိုင်းဖှယျ။
Credit: https://government.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness ဒူဘိုင်းကနေကောင်းသော & အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ဒူဘိုင်းလူနေမှုအဘို့ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခုတော့ဒီအံ့သြဖွယ်ရာအရပျကိုပင်မြင့်မားတဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုအဘို့သို့ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းမြို့တစ်စမတ်မြို့ဖြစ်လာသည်။ ဒူဘိုင်းမွကွေီးပျေါမှာအပျော်ရွှင်ဆုံးလူနေမှုပုံစံစတဲ့လုပ်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ဒေသခံနိုင်ငံသားများ, အစဉ်မပြတ်သူ့ဖွဲ့ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum, ဒုတိယသမ္မတများနှင့်ဒူဘိုင်း၏ယူအေအီးနှင့်အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ဝန်ကြီးချုပ်၏ရူပါရုံကိုအောက်ပါ။
ဒူဘိုင်းကနေပြည်သူ့အစိုးရနေရာများကနေပါဝင်ဆောင်ရွက် start သငျ့သညျ။ ဥပမာ, ဒူဘိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးစိန်ခေါ်မှု မြို့ခရီးစဉ်နှင့်အထူးရက်ပေါင်းအပေါင်းတို့နှင့်ဒေသဆိုင်ရာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်သူများကြောင်းကိုအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားများဟုဒူဘိုင်းရဲ့ဒေတာကို။ အဖြစ်ကောင်းစွာဧည့်သည်များ, စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ, မိဘများနှင့်မိသားစုများအဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းဗျူဟာ၏အုတ်မြစ်ဖြစ်လာသည်။ ကမ်ဘာပျေါမှာအပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာစေရန်။
ဒူဘိုင်းကနေကောင်းသော & အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန - အကြွေး: https://www.hw.gov.ae/
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်အသက်တာ၌အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဘယ်လိုခက်ခဲသငျသညျဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် ယူအေအီးအတွက်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်တစ်ဦးအပြုသဘောအတွေးအခေါ်တွေကိုတက်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အပြုသဘောလူတစ်ဦးဖြစ်သငျသညျကငျြ့သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်, စိတ်ထဲ၌ဤအတူ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရနဲ့နေ့တိုင်းနည်းနည်းကို run ဖို့ကြိုးစားပါ။ အပြေးပင် 15 မိနစ်နျြးမာရေးအတှကျကောငျးတယျ။ သင့်ရဲ့အလုံးစုံကျန်းမာရမှတ်ချိန်ခွင်လျှာကိုပိုပြီးထက် 60% တစ်နှစ်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်မလား။
သငျသညျကိုကောင်းစွာသိကျွမ်းသူတစ်ဦးဦးမှတစ်ဦးအပြုသဘောလမ်းအတွက်ပြောနေတာစတင်ပါ။ ကောင်းပြီ, အခြားသောလမ်းမွှေး cookie ကိုစားသုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့နဲ့အတူ Endorphins အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်နှငျ့သငျ pumped နည်းနည်းခံစားစတင်ခဲ့ကြရတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့သင့်ရဲ့အိပ်ရာများတွင်တင်သောနှင့်မှားအဘယ်အရာကိုစဉ်းစားနေသည်။
အဆိုပါအဆိုးမြင်အတွေးတွေသင်၏အသက်တာကိုကျော်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့မူကား, ရှာကြသည်ဒါမှမဟုတ်သင်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်အဆုံးသို့သွားရန်အကြောင်း,
Burj Khalifa လွှတ်ချလိုက်။ သငျသညျတစျနေ့ကတဆင့်အပြုသဘောနေဖို့အခါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အားလုံးသင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှငျ့သငျအနာဂတျမှာပိုကောင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဒူဘိုင်းတစ်ပျြောရှငျမြို့ဖြစ်ရည်မှန်းထားသည်။ နှင့်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သငျသညျလညျးအဆိုးထင်သူမည်သူမဆိုကူညီနိုင်သည်။